Xaabsade haduu Guddoomiyaha Golaha [Guurtida] rabo xaq ayuu u leeyahay, haday u banaanaanayso iyo haduu igu qabsanayo labadaba”Saleebaan Gaal. | Samatar's Weblog
Samatar 2008-05-22 (samatar) Hargeysa(HWN):- Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland Md. Saleebaan Maxamuud Aadan [Saleebaan Gaal] ayaa maanta dalka ku soo laabtay, ka dib markii uu oo muddo dhowr bilood ah dibada hawlo caafimaad ugu maqnaa, isla marrkaana waxa si weyn loogu soo dhaweeyey Madaarka Magaalada Hargeysa, oo uu maanta gelinkii dambe ka soo degay.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad fiican tahay wakhtigan, sidoo kale waxa laga waraystay xaalada siyaasadeed ee dalka ka taagan ee ay ka midka yihiin, muddo kordhintii Guurtidu u samaysay Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, heshiisyada hordhaca ah ee ay gaadheen Xukuumadda iyo Mucaaridku iyo warar la isla dhex marayo oo sheegayay in Jagadiisa Guddoomiynimo ee Guurtida looga qaadayo Axmed Cabdi Xaabsade oo ahaan jiray Guddoomiyihii Golaha Wakiillada Somaliland wixii ka horeeyay 1997-kii.
Guddoomiye Saleebaan waxa uu tilmaamay in ay Sharci ahayd muddo-kordhintii Golaha Guurtidu u sameeyay Madaxweyne Rayaale, isla markaana uu Xaabsade xaq u leeyahay Jagada Guddoomimye-nimo ee Guurtida hadii uu ku qabsado isaga iyo hadii looga qaaddo labadaba.
Ugu horeyna isaga oo ka waramaya xaaladiisa caafimaad waxa uu yidhi Guddoomiyuhu “Xaaladayda caafimaad aad iyo aad ayay u wanaagsantahay, marka hore waxaan u tagay qaliin laakiin way iyagu yara rafatay, illaahay mahadii imika aad iyo aad ayaan u fiicanahay.”
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa ku daray Saleebaan Maxamuud Aadan oo uu yidhi, “Waxaan u soo noqday inaan ka qayb-qaato hawlaha Qaranka ee inoo yaala.”
Guddoomiyaha Golaha Guurtida mar la waydiiyay su’aal ahady sida uu qaliinka lagu soo sameeyay uga gudan karo waajibaadkiisa shaqo, waxa uu yidhi, “Xaaladaydu meel fiican ayay maraysaa, oo waydinkaa arkaya oo nabadgalyo ayaynu ku wada joognaa, wixii hawl ah ee waajibkayga ahna waan ka qabsan karayaa.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Guurtidu.
Mar la sii waydiiyay Guddoomiyaha muddada sannadka ah ee ay u kordhiyeen Madaxweynaha mawqifka uu isagu Guddoomiye ahaan ka taagan yahay iyo sida ay wax uga jiraan aragtida ah in dadka qaar u arkaan Gulihii Guurtida ee dab kasta oo kaca damin jiray ay iyagii doorkan sii hurinayaan, Salaabeen isaga oo taa ka jawaabaya waxa uu yidhi,
“Kumaanaan ogayn kamana muuqato. Anigu waxaan idin leeyahay Axsaabta iyo Xukuumadduba soo jeedin bay leeyihiin, ee sharciyaynteeda waxa leh Golayaasha Xeer-dejinta, ama wada jir ha ahaato ama gooni-gooni ha ahaato iyo mid waliba ta uu gaarkiisa u leeyahay ha ahaato, in sidaa loo aqbalo ayay ahayd, wax maanta la bi’iyayna (la xumeeyayna) anigu ma arko.”
Sidoo kale Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan, waxa la sii waydiiyay muddo kordhinta qodobka 83’aad ee ay u cuskadeen Guurtidu oo tilmaamayay xaalad nabadgalyo-darro oo dalka ka taagan, taasina aanay wakhtigan jirin, isla markaana ay Mucaaridku ku tilmaameen mid sharci-darro ah xiligan, iyo sida uu isagu u arko. Waxaaanu Gudddomiyuhu ku jawaabay oo uu yidhi,
“Waxaan idin idhi hadii Guurtidi sharciyadii jabisay dee loo fadhiyee. Laakiin, anigu waxaan qabaa, oo aan horena u idhi Hay’adaha Xeer-dejinta ayaa leh sharciyaynteeda iyo xalaalaynteeda, wixii kalena waa soo jeedin, tiina way ku dhaqaaqday, hadii qolo tidhi 9 ayaanu kordhinay, Guurtidiina iyada oo qodobo u cuskanaysa ayay kordhisay. Haddii wax jabeena dee waa la isla arkayaa, laakiin anigu waxaan qabaa inaan wax gaf ah oo halkaa ka muuqdaa jirin.” Ayuu yidhi oo uu ku jawaabay Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland.
Waxa kale oo la waydiiyay Guddoomiyaha Guurtida, in heshiis ay dhawaan gaadheen Xukuumadda iyo Xisbiyada Mucaaridku, oo qeexayay wakhtiga la kala qabanayo doorashooyinka Madaxtooyada iyo dawladaha hoose, isla markaana looga baqa-qabo in Golaha Guurtidu mar kale soo fara-geliyo oo ay muddo kale kordhin karaan iyo sida ay wax uga jiraan taas.
Guddoomiyuhu waxa uu kaga jawaabay su’aashaas oo uu yidhi, “Golaha Guurtidu ma aha mid qas iyo dhibaato dalka ku keenaya, Illaahayna kama dhigo. Waxaanan idin leeyahay meel ay idinka marayso garanmaayee soo jeedin ayay leeyihiin Axsaabtu, sharciyaynteedana Golayaasha ayaa leh.”
Mar la siiwaydiiyay Guddoomiye Saleebaan, sida uu wax uga ogyahay iyo sida ay wax uga jijraan warar baryahanba la isla dhexmarayay oo sheegayay in Jagada Guddoomiyenimo ee Saleebaan ka hayo Golaha Guurtida, lala doonayo Axmed Cabdi Xaabsadde,
waxaanu ku jawaabay Saleebaan “Waxaan idin odhan lahaa Axmed Cabdi Xaabsadana yaan la ribaynin, Qarankana yaan meel lagaga dhicin. Xaabsade haduu Guddoomiyaha Golaha rabo xaq ayuu u leeyahay, haday u banaanaanayso iyo haduu igu qabsanayo labadaba xaq ayuu u leeyahay. oo habkeeda ayaa loo mari doonaa. Laakiin ma rabo waxan aad ka sheegaysaan.” Sidaa ayuu yidh Saleebaan Maxamuud Aadan oo uu ku jawaabay.